လေးနှစ်သမီးရဲ့အင်္ဂါကို ပထွေးက ပေါင်ပေါ်တင် လက်ညှိးထိုးထည့် ယုတ်မာတဲ့ ဖြစ်ရပ် – XB Media Myanmar
၂၆.၉.၂၀၁၉နေ့၁ဝဝဝအချိန်တွင် မစန္ဒာကျော်(၂၃)နှစ်၊ဈေးရောင်း၊ အမှတ် မရှိ မီးရထားဝင်း မြို့ဟောင်း(၁)လမ်း (၁)ရပ်ကွက်ရမ်းကုန်းမြို့နယ်နေသူသည် ဈေးရောင်း သွားရန်အတွက် သမီးဖြစ်သူမ…………….(၄)နှစ်၊လိပ်စာတူအား တစ်လမ်း ထဲရှိ(၃)အိမ် ကျော်တွင်နေထိုင်သော
မိခငဖြှဈသူ ဒေါစြနြးစနြးဝငြးထံသို့ ပို့ဆောငအြပနြှံခဲ့ပှီး(၂)နာရီအခွိနတြှငြ ဈေးရောငြးသှား ခဲ့ရာ၎င်းငျးငြး အခွိနြ ဈေးရောငြးနစဉြေ တဈရပကြှကတြညြးနမသေီဂြီက ဖုနြးဆကြ၍ မိခငြ ဈသူ ဒေါစြနြးစနြးဝငြး၏ နောကယြောကကြွာြးဖှဈသူ ဖှင့ဝြငြးကှိုငြ(၅၇)နှဈ၊ဈေးရောငြး၊၊ အမှတြ(မရှိ)၊မီးရထားဝငြး(ကွူး)၊
မြို့ဟောင်း(၁)လမ်း၊(၁)ရပ်ကွက် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်နေသူကသမီးဖြစ်သူ မ……..မိန်းမ ကိုယ်နှင့် စအိုအတွင်းလက်ညှိုးဖြင့်ထိုးနိုက်၍ ၎င်း၏တန်ဆာအား လက်ဖြင့်ကို င်ခိုင်း ခြင်း၊ သမီးဖြစ်သူ၏ဘောင်းဘီကိုဆွဲချွတ်ကာ ပေါင်ပေါ်တင်ခဲ့ပြီးသားမယားပြုကျင့်ရန် ကြံစည်နေစဉ်ဒေါ်ခင်စန်းနုက မြင်တွေ့သွားသဖြင့်
သမီးဖြစ်သူအား လွှတ်ပေးခဲ့ကြောင်း ဖုန်းဆက်ပြောဆိုလာသဖြင့် နေအိမ်သို့ပြန်လာခဲ့ပြီး ရပ်ကွက်အတွင်းမိတ်ဆွေများဖြစ်သူ မသီရိ ၊မမိုးသီတာတို့၏ရှေ့တွင် သမီးဖြစ်သူ မ………. ကိုမေးမြန်းရာ သမီးဖြစ်သူမှ ဘဘက သမီး မိန်းမကိုယ်နှင့်စအို ထဲကို လက်ချော င်းနဲ့ ထိုးတယ် သူ့ တန်ဆာကိုလည်း ကိုင်ခိုင်းတယ်ပေါင်ပေါ်တင်ကာ၊
ဘောင်းဘီချွတ်ပြီးတင်တယ်”ဟုမ…..ကေ ပြောသဖြင့် သမီးဖြစ်သူ မ…….. ကိုလက်ဖြင့်နို က်ဘောင်းဘီချွတ်ပြီးပေါင်ပေါ်တွင် ထိုင်ကာအဓမ္မပြုကျင့်ရန်ရန်အားထုတ်ခဲ့သူ ဝင်းကြို င်ကိုအရေးယူပေးရန်မ….က တိုင်တန်းခဲ့ရာဘုရင့်နောင်(ပ)၁၆၄၁/၂၀၁၃ မ ၃၇၆/၅၁၁ ဖြင့်၂ ၆.၉.၂၀၁၉ နေ့ ညနေ၄နာရီ၁၅ အ ချိန်အမှုရေးဖွင့်ကာ အမှုစစ်ရဲအုပ်ကိုကိုလင်းက စစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေကြောင်းသိရသည်။